Myanmar Blog | မြန်မာလိုရေးထားတာလေးပါ။
•August 28, 2017 • 1 Comment
sorry, my blog for tech and travel, but now Rakhine Ethnics is die in Rakhine State.
How they make #Propaganda with fake news
#Bengali so called #Rohingya at #Rakhine State, Myanmar
here at real news.
It’s very first day in 2017 aug 24. attack to 30 of police security station. 12 people is dead, 2nd day 120 or more ethnics is dead, because of #Terrorists #Bengali so call #Rohingya
#Terrorists is follow #Terroristim, don't say age, gender, location, religion, #StopTerrorists , #Bengali so call #Rogingya at #Rakhine pic.twitter.com/1LobG4OEVu
— kokoye2007  (@kokoye2007) August 28, 2017
ohhh kindly #Bengali so call #Rogingya ? #Terrorists is follow #Terroristim, not depend on age, location and religion. #StopTerrorists pic.twitter.com/3kL7lCo0q7
Now Rakhine state at ethnics #Rakhine is homeless and fear.
Because of recent attacked, carried out by extremist Bengali insurgents, 400 over primary and secondary schools are forced to shut down in the area of Maungdaw, Buthidaung and Yathataung. U Aung Kyaw Htun, Rakhine State Education Director Office told Narinjira News Agency on August 25, 2017. Bengali insurgents also attacked Nanthartaung School where 370 students were hiding, according to the latest news.
here at some embassy statement
our Myanmar government statement
Tweets by MyanmarSC
here at #Propaganda list
Tweets by rohingyablogger
Tweets by OpRohingya
Tweets by AJEnglish
Tweets by mdskar
•September 25, 2009 •2Comments
Windows တင်ခါနီးရင် ကျွန်တော့်အသိတွေက အခွေဘယ်လောက်ပဲ ပေးထားပေးထား ကျွန်တော့်ကိုပဲ လာလာတင်ခိုင်းတတ်ကြပါတယ်။
Desktop Computer တေဿွမှာ Rom မကောင်းရင် တခြားစက်က DVD Rom ဖြုတ်လဲပြီး Windows တင်တာ Software တင်တာလုပ်လို့ရပါတယ်။ Laptop ဆိုရင်ကော External DVD Rom တွေ Combo တွေရှိတော့ရှိပါရဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ Software တင်ရင် သိပ်ကိစဿစမရှိပေမယ့် Windows တော့တင်လို့မရတာ တင်ရင်းတန်းလန်း ရပ်သွားတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Windows Vista ဆိုရင်တော့ Mocrosoft က USB Drive လေးတွေထဲမှာ Vista ထည့်ပြီးရောင်းပါတယ်။ Stick လေးဝယ်ပြီးတော့ Vista တင်လိုက်ရုံပါပဲ။ မြန်မာပြည်တော့ ရောက်လာတာမတွေ့မိဘူးဗျ။
အေးလေ ရောက်လာလဲ $700 လောက်ပေးပြီး ဘယ်သူဝယ်မတုန်း ?
ကဲဒီတော့ ကိုယ်ပိုင် USB လေးတစ်ခုနဲ့ Vista Install လုပ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြည့်ရအောင်
Vista သွင်းမယ့် Desktop / Laptop မှာ
Vista သွင်းနိုင်တဲ့ Motherboard နဲ့ CPU ဖြစ်မဖြစ်အရင်စစ်ဆေးပါ၊
HDD 8 GB နှင့်အထက်
Memory Ram 1 GB နှင့်အထက်
USB ကနေ Boot လုပ်နိုင်ရပါမယ်
(Vista တင်နိုင်တဲ့ Board တိုင်းမှာတော့ USB Boot ကို Support လုပ်ပါတယ်၊ USB ကနေ Boot တက်နိုင်တဲ့ Board တိုင်း Vista ကို Support မလုပ်ပါ)
(Vista တင်မယ့်စက်မှာ အောက်ဖော်ပြပါစာရင်း မရှိလဲ ရပါတယ်။ အခြားစက်မှာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်)
Vista Install DVD
Vista Install Setup DVD ခွေကို DVD Rom ထဲထည့်ထားပါ။
USB Stick က Data တွေတခြားနေရာမှာ သိမ်းဆည်းပါ။ (Format ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Data တေဿွအကုန်ပျက်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။)
ပြီးရင် Windows Key + R (Run Box) => cmd (Command Prompt)
ကိုသွားပါ။ Command Prompt ပော်လာရင် အောက်ပါအတိုင်း အစဉ်လိုက်လုပ်ဆောင်ပါ။
အကယ်၍ စက်တွင် HDD တစ်လုံးထက်ပိုနေပါက အဆင့်နှစ်တွင် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။
မသေချာပါက Diskpart ရိုက်ပြီး List Disk ရိုက်ကြည့်ပါ။ ၂ ခုထက်ပိုနေပါက FAT32 ဖြင့် Usb Stick Storage Size အတိုင်းရှိနေသော Disk ကိုရွေးရပါမည်။ ကျန်သည့် အဆင့်အားလုံး တူညီပါသည်။
Exit ရိုက်ပြီးရင် Diskpart ကနေထွက်သွာပြီး Command Prompt ပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
Windows Key + E (My Computer/ Explorer) ကိုခော်ပါ။
DVD အခွေရဲ့ Drive Letter နဲ့ USB Stick ရဲ့ Drive Letter ကိုမှတ်ထားပါ။
ဥပမာ DVD=E:\_ USB Stick=F:\_
xcopy e:\_*.* /s/e/f f:\_
ဖိုင်များကို Copy ကူးနေသည်ကို မြင်တွေ့ရပါမည်။
ဖိုင်များကူးခြင်း ပြီးဆုံးပါက USB Stick ကို Safe and Remove ပြုလုပ်က ပြန်လည်ဖြုတ်ယူပြီး
Windows Vista တင်မည့်စက်တွင် တပ်ဆင်ပါ။
Bios သို့ဝင်ရန် / Boot Setup သို့ဝင်ရန် ပေးထားသည့် Key တစ်ကိုနှိပ်ပါ။
ဥပမာ Gateway တွင် BIOS အတွက် F2, Boot Setup အတွက် F10
အများအားဖြင့် Bios သို့ဝင်ရန်မှာ DELETE Key ဖြစ်တတ်ပါသည်။ မည်သည့် Key နှိပ်ရမည်ကို စက်ဖွင့်ဖွင့်ခြင်း Screen အောက်ခြေတွင် ပြသထားတတ်ပါသည်။
BIOS Setting တွင်ပြုပြင်မည်ဆိုပါက
Boot Sequence ကိုရှာပါ။
Sorting စီထားသော List တွင် Usb Storage / USB ကို (First Drive USB) အပော်ဆုံးရောက်အောင်ပြောင်းလဲပေးပါ။
နောက်တစ်ကြိမ်စက်ဖွင့်ပါက USB Disk မှ Vista Setup တက်လာပါလိမ့်မည်။
Windows Setup ပြုလုပ်ပြီးပါက နောက်တစ်ကြိမ်တွင် BIOS Setting အား မူလအခြေအနေ (First Drive HDD)သို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
Boot Setup ဖြင့်အသုံးပြုပါက
သတ်မှတ်ထားသော Key ကိုနှိပ်လျှင် CD/DVD , USB, Network, HDD စသဖြင့် ပော်လာပါမည်။
USB ကိုရွေးပြီး Enter နှိပ်ရုံဖြင့် USB မှ Vista Setup တက်လာပါမည်။
DVD အခွေမှ Windows တင်သကဲ့သို့ပင်ဆက်လက် Installation လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။
Tags: Installation, USB, Vista, Windows
•September 23, 2009 • 1 Comment
Gmail ကို Check လုပ်ဖို့ Browser တွေဖွင့်ပြီး Login Page ခော်ပြီး Password ရိုက်ထည့်ရတဲ့ အဆင့်တွေ အမြဲတမ်းလုပ်နေရတာ ငြီးငွေ့နေပြီလား။
Check Gmail From Command Line [ Linux & Mac OS X ]
တဲ့ Gmail ကို CLI Mode ကနေ Check လုပ်တာပါ၊ New Mail ဘယ်နှစ်စောင်ရှိလဲ စစ်ဖို့ အမြန်ဆုံး နည်းလမ်းပါပဲ။
curl -u username --silent "https://mail.google.com/mail/feed/atom" | perl -ne 'print "\_t" if /<name>/; print "$2\_n" if /<(title|name)>(.*)<\_/\_1>/;'
အဲဒီမှာ USER Name နေရာမှာ Gmail အကောင့်ထည့်ပေးရုံပါပဲ၊ ပြီးရင် Password တောင်းပါတယ်၊ ပြီးတာနဲ့ Inbox Status ကိုပြပါတယ်၊ မြန်လဲမြန် လွယ်လဲလွယ်တဲ့နည်းပါပဲ။
နောက်တရက်လောက်နေလို့အားရင် Script ဖိုင်အနေနဲ့ တင်ပေးပါ့မယ်၊ ဖိုင်ကိုခော်ရုံနဲ့ inbox Status ပြအောင်ရယ် Username Password ထည့်ထားလို့ရအောင်ရယ် လုပ်နိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်၊
Posted in အကြွေး, Internet, Knowledges, Linux, Ubuntu
Tags: Apple, CLI, Gmail, Inbox, Linux, Mac
Ubuntu 9.10 Alpha5မှာ Wubi အသုံးပြု၍ အဆင်မပြေနိုင်သေးကြောင်း စမ်းသပ်သိရှိပါသဖြင့် Ubuntu 9.10 အစား Ubuntu 9.04 နှင့် Software (APT) များအား Update ပြုလုပ်ထားသော Update CD နဲ့အစားထိုးပေးသွားပါမယ်။ အဲဒီအခွေနှစ်ခွေရှိရုံနဲ့ Ubuntu ကို Windows ပော်မှာ Software တင်တာထက် လွယ်ကူစွာတင်ပြီးသုံးသွားနိုင်မှာပါ။ Internet မရှိလဲ သုံးလို့ရမှာပါ။ Driver တွေ Audio & Video Code တွေတခါတည်း ပါဝင်ပါမယ်၊ နောက် Themes တွေကို Vista, XP, MAX OSX စတဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသား Design တွေထည့်ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
Linux နဲ့ Ubuntu စာအုပ်ပေါင်း 80 လောက်လဲရှိပါတယ်။ List တော့မတင်တော့ပါဘူး၊ လိုအပ်ရင် လှမ်းမှာနိုင်ပါတယ်။
Posted in Books, E Book, Linux, Local, Ubuntu
Tags: Free CD, Linux, OS CD, Ubuntu
Karmic Koala Alpha5(Ubuntu) အခွေကို မဖြစ်စလောက် အခကြေးငွေနဲ့ Download ဆွဲလို့ရလို့ ဝမ်းသာအားရ Download ဆွဲထားတာရှိပါတယ်။ ကြိုတင်အသုံးပြုလိုသူများအား အခမဲ့ ပေးဝေသွားပါမယ်။
ရန်ကုန် Downtown6မြို့တွင်း အိမ်တိုင်ရာရောက်နဲ့ အခြားမြို့နယ်များမှလူများ နီးစပ်ရာ Downtown မြို့နယ်များရှိ Internet ဆိုင် တဆင့်လိပ်စာပေးခြင်းဖြင့် မှာယူနိုင်ပါတယ်။
မနဿတလေးကိုတော့ ဒီလ တတိယပတ်လောက် ပို့ပေးပါ့မယ်။ ရန်ကုန်လိုတော့ Door to Door မလုပ်ပေးနိုင်တော့ပါဘူး၊ Internet ဆိုင်မှာ သွားယူမယ်ဆိုရင်ဖြင့် လိပ်စာပေးပါမယ်။
အောက်က From လေးတော့ ဖြည့်ပြီး Email ပို့ပေးပါ။
မေးပို့တွင်ပါဝင်သော လိပ်စာမှန်ကန်ပါက အခွေပေးပို့သွားမည်သာဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်ချက်များအား တတ်နိုင်သမျှ ဖြည့်စွမ်းနိုင်ရန် ကြိုးစားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
NGO မဟုတ်သလို အဖွဲ့အစည်းလည်းမဟုတ်ပါ။ တတ်နိုင်သမျှ ဒါနပြုခြင်းသာဖြစ်ပါသည်၊
Continue reading ‘Free Linux CD Order’
Posted in ရန်ကုန်, Linux, Ubuntu
http://webupd8.blogspot.com/ ကပေးထားတဲ့ Linux Beginner တွေအတွက် စာအုပ်လေးအုပ်ပါဗျာ။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေပဲဗျ၊ အခြေခံသမားတွေတင်မကဘူး အလှမ်းကျယ်ချင်ပြီး အလယ်လပ်သွားတဲ့ ကျွန်တော့်လိုလူတွေလဲ ပြန်ဖတ်နိုင်တာပေါ့ဗျာ၊
Here are4Linux books which are ideal forabeginner:
1. A Newbie’s Initiation To Linux – Download (1.90MB)
2. Introduction to Linux – A hands on guide – Download (1.52MB)
3. Ubuntu Pocket Guide and Reference – Download (2.13MB)
4. GNU/Linux Command−Line Tools Summary – Download (682.45KB)
Thanks to http://insanityville.com for posting these.
Posted in E Book, Idea, Linux, Share, Ubuntu
Tags: Book, Command, download, Linux, Share, Ubuntu